Guddoomiyekuxigeenka Komishanka Doorashooyinka oo beeniyey inuu walaac ka muujiyey sida diiwaangelintu ka qabsoomayso Gobolka Togdheer | Somaliland.Org
February 25, 2008	Ceerigaabo (Somaliland.org) – Guddoomiyekuxigeenka Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Mr. Xirsi Cali X. Xasan oo horkacaya weftiga Komishanka ee kormeerka ku maraya saddexda gobol ee Bariga Somaliland ayaa sheegay in aanu jirin wax walaac ah oo uu ka muujiyey sida diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashadu uga suuragelayso Gobolka Togdheer, abaaraha wakhtigan ka jira gobolkaas iyo wax diidmo ah oo kaga yimi bulshada gobolka.
Guddoomiyekuxigeenka Komishanka Mr. Xirsi Cali X. Xasan oo aan galabta telefoon kula xidhiidhnay isagoo jooga magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag, waxa uu beeniyey warar saxaafadda Hargeysa qaar ka mid ahi ay faafiyeen, kuwaas oo sheegay in Guddoomiyekuxigeenka Komishanku uu caddeeyey mar uu ka hadlay Burco toddobaadkan in Gobolka Togdheer aanay ka suurageli karin diiwaangelintu wakhtiga loogu talagalay, xaaladda abaarta iyo biya-la’aanta ah ee ka jirta gobolkaas darteed. Waxana uu sheegay in hadalkaas iyo wararka sheegaya in dadka gobolka Togdheer ay diiddan yihiin diiwaangelintuba ay yihiin been abuur aanay waxba ka jirin.
“Horta warka la ii soo sheegay ee joornaalku qoray waa been. Ma jirto meel aan ku soo jeediyey in diiwaangelinta dib loo dhigo iyo in doorashada dib loo dhigo midnaba,” ayuu yidhi Xirsi.
“Ma jirto cid na diiddey oo diiddan diiwaangelinta haba yaraatee,” ayuu raaciyey.
Guddoomiyekuxigenka Komishanka, Mr. Xirsi oo ay weheliyaan laba xubnood oo kale oo ka tirsan Komishanka iyo xubno ka kala socda saddexda xisbi iyo weliba Guddida Farsamo ee diiwaangelinta codbixiyayaasha waxay hawshooda dhismaha xafiisyada Komishanka ka bilaabeen magaalada Burco ee Gobolka Togdheer, halkaas oo ay ka ambabaxeen, kadib markii ay Sabtidii kaga dhawaaqeen Guddida Doorashooyinka Gobolka Togdheer iyo Degmada Burco, waxayna Axaddii shalay gaadheen magaalada Ceerigaabo oo ay sidoo kale ka dhisayaan guddidii doorashooyinka ee Gobolka Sanaag iyo degmooyinkiisa.
Waxana uu sheegay in odayaasha iyo waxgaradka reer Burco ay isku afgarteen diiwaangelinta, wax diidmo ahna aanay kala kulmin cidna.
Waxa uu sheegay in abuurtu ay jirto, isla markaana ay tahay duruuf caam ah oo aan ku koobnayn gobol keliya, isaga oo xusay in laga bilaabo Hargeysa oo ay ka ambabaxeen ilaa Ceerigaabo ay abaartu ka jirto. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in aanay ahayn wax iminka khuseeya diiwaangelintu.
“Dabcan, diiwaangelinta marka la gaadho waynu eegaynaa wakhtiga ay ku beegan tahay, mana filayno inay ku beegan tahay xilli abaar ah. Waayo, wakhtigan iminka maaha mid aanu iminka bilaabaynoe waanu sheegi doonnaa wakhtiga diiwaangelintu dhacayso sidaanu horeba u sheegnay,” ayuu yidhi Xirsi.
“Wax aanu hore u dhignay iyo wax aanu dib u dhignay midna ma jirto, cid diiddeyna maanaan arag, warka jaraa’idka ku soo baxayna waa been,” ayuu raaciyey.
Xirsi waxa uu sheegay in waxa keliya ee uu sheegay ay tahay in dareenkiisa shakhsiga ah uu ka warramay abaarta baaxadda leh ee dalka ka jirta, taas oo aan sheegay ayuu yidhi inay tixgelinayaan Komishan ahaan, inkasta oo aan la cayimin wakhtiga diiwaangelinta la qabanayo, ayna ku beegan tahay xilliga roobka. Waxa kale oo uu sheegay inuu u caddeeyey dadka reer Togdheer in hadda aanay u socon inay bilaabayaan hawsha diiwaangelinta, balse ay u socdaan inay sameeyaan xafiisyadii Komishanka ee Gobolada iyo degmooyinka.
“Waxaan filayaa in faham khaldan ka qaateen [saxaafaddu] dadka reer Burco oo moodayey socodkayaganba in bilaabayno diiwaangelintii oo la fadhiisanayo goobihii, taasna waanu u sheegnay in aan la bilaabayn hawsha ee ay u socdaan xafiisyadii gobolada iyo degmooyinka,” ayuu yidhi Xirsi.
Waxa uu sheegay in Gobolka Togdheer ay ka dhiseen Komishanka Gobolka iyo Guddiyadii degmooyinka Burco iyo Oodweyne, halka Buuhoodlena ay dhisi doonaan marka ay bilaabaan dhismaha gobolka Sool.
Sidoo kale, waxa uu sheegay inay shalay iyo maanta dhammeeyeen dhismaha Guddiyadii Komishanka Doorashooyinka ee Gobolka Sanaag iyo degmooyinkiisa qaar ka mid ah, berritona ay u bixi doonaan degmada Badhan ee Bariga Sanaag.
Weftigan Komishanka ayaa waxay u xilsaaran yihiin saddexda Gobol ee Togdheer, Sool iyo Sanaag.
Xirsi waxa uu sheegay in labada gobol ee Sanaag iyo Togdheerba ay kulamo la yeesheen odayaasha, madax-dhaqameedyada, waxgaradka bulshada iyo maamulka heer gobol iyo degmoba, isla markaana ay u sharraxeen qaabka loogu talagalay diiwaangelinta iyo dhismaha Guddiyada Komishanka ee ay u socdeen.
Waxana uu sheegay in dadku guud ahaan ay ka cabanayaan hal qodob oo ah in qofku uu ka codaynayo oo keliya meesha uu iska diiwaangeliyey, taas oo mid ku adkaanaysa bulshada goboladaas oo u badan reer guuraa.